Akanakisa epurasitiki Tire Cover Cover Mugadziri uye Fekitori | Aosheng
Chivharo chepurasitiki chepurasitiki chinogona kupa dziviriro yakakwana kune rako tire. Iyo haigone chete kuchengetedza tai rakachena uye rakashambidzika, asi zvakare kudzivirira iro vhiri kuti risakwikwidzwe kana kusvibiswa.
✦ Chinyorwa: Pe epurasitiki
✦ Ruvara: Yakajeka kana chena.
Saizi: 1mx1m, 1.2mx1.2m…
✦ Zviri nyore kuchengeta mumotokari kana kumba pasina kushandisa yakawandisa nzvimbo.
✦ Logo inodhindwa.
Chigadzirwa chinoraswa, chakachena uye chiri nyore.
Chivharo chepurasitiki chepurasitiki chinogona kupa dziviriro yakakwana kune rako tireyi. Iyo haigone chete kuchengetedza tai rakachena uye rakashambidzika, asi zvakare kudzivirira iro vhiri kuti risakwikwidzwe kana kusvibiswa. Yakagadzirwa neEP epurasitiki zvinhu izvo zvine simba uye hazvisi nyore kuputswa. Yese huremu hwakareruka uye nyore kuchengeta kana kutakura.
Saizi yekupeta diki inoita kuti zvive nyore kuchengetera mumota kana kumba usingashandise nzvimbo yakawandisa. Sechigadzirwa chinoraswa, chichiraswa mushure mekushandiswa, chivharo chepurasitiki chepurasitiki chakachena uye chiri nyore. Zvakanaka kana mutengi achida kudhinda logo pairi. Uyezve, Zviri nyore kushandiswa.
Chivharo chepurasitiki chepurasitiki chinogona kupa dziviriro yakakwana kune rako tire.
Iyo haigone chete kuchengetedza tai rakachena uye rakashambidzika, asi zvakare kudzivirira iro vhiri kuti risakwikwidzwe kana kusvibiswa.
Kune akawanda marudzi eChivha ekushandisa kwakasiyana.
Type 1: Flat kumucheto uye Kuisirwa kumucheto vhiri bhegi bhegi
Flat kumucheto uye Kuisirwa kumucheto tai yekuvhara bhegi inonyanya kushandiswa
yezvitsva uye yakashandiswa kubata matai nekuchengetedza.
Yaigona kuvhara taya ndokusunga muromo kudzivirira
kusvibiswa kweguruva panguva yekufambisa uye yekuchengetedza
1. Chinoraswa chigadzirwa, chakachena uye chiri nyore.
2. Logo inodhindwa.
Yakachena kana yakajeka
250pcs / roll, 1 mupumburu / bhokisi
Nyora 2: Shower cap mhando tire tire
Shower kapu yemhando yetirevha inovhara inonyanya kushandiswa kuchengetedza tire
panguva yekupenda mota kupenda kudzivirira iyo pendi inosara
kubva pakudonha nekusvibisa vhiri.
Usage: Sarudza saizi yakakodzera yakatarwa yakananga patayi inogona kupendwa
Kuenzaniswa neyetsika nzira yekushandisa bepa uyezve kunamatira tepi.
1. Mushure me corona kurapwa, anogona nani adsorption pendi
2. Isina mvura, osmosis chiratidzo, isina lint
3. Iyo yerabha bhendi inogona kukurumidza kumisikidzwa uye kugadziriswa pane iro tayi, iri nyore uye iri nyore kushanda uye inochengetedza zvakanyanya nguva, zvekuti zvinongotora isingasviki masekondi gumi kuvhara tai rimwe nerimwe
4. Inochengetedza kushandiswa kwetepi nepepa, kunoderedza mutengo, uye firimu inoramba isina guruva, nokudaro ichidzikisira kugadzirisazve, kuchengetedza nguva, kushanda nesimba nemari. "
Type 3: Monolithic tire butiro - hapana yakasununguka bhendi kana neelastic
1. Corona kurapwa, inogona nani adsorption pendi,
2. Isina mvura, osmosis chiratidzo, inobvaruka kusagadzikana, isina lint, nekuda kweiyo yakakwira elastic zvinhu zvakagadzirwa, zviri nyore uye zvakanyanya kubata kubata
3. Saizi imwe chete ndiyo inodikanwa - inokwana hubs ese akajairika
A: Pakati pemazuva makumi matatu mushure mekuwana kubhadhara kwemutengi.
Mubvunzo: Ndeipi yako mini order yakawanda?
A: mabhanzi mazana matanhatu panguva imwechete.
Mubvunzo: Fekitori yako iripi?
A: Fekitori yedu iri kuQingdao Guta, China. Tinokugamuchira iwe kufekitori yedu.
Pashure: Plastiki Mota Kuvhara
Zvadaro: Mota Plastiki Gear Shift Cover
Kuchenesa mota kwakaiswa